Aya ndiwo mashandiro eHandoff nyowani anoshanda paPambaPod mini uye iOs 14.4 | IPhone nhau
Aya ndiwo mashandiro eHandoff nyowani anoshanda paPambaPod mini uye iOS 14.4
Apple yakaburitsa nyowani nyowani ye iPhone uye HomePod mini iyo inotora zvirinani mukana wemikana inopihwa neiyo nyowani U1 chip yezvazvino Apple zvishandiso, kubvumira kukura kukuru kwekutenderera kweodhiyo uye kutonga zvimwe chete pazvinhu izvi.
IOs 14.4 iri pano yeiyo iPhone, iPad uye yeiyo HomePods, uye pakati pezvinhu zvitsva zvinoratidzira nzira nyowani yekugadzirisa odhiyo odhinda pakati pePambaPod neiyo iPhone nekuda kweiyo U1 chip, chinhu chitsva chinosanganisira iyo yazvino iPhones uye iyo HomePod mini nazvo izvo zvinokwanisika kuziva zvakanyanya kunyatso chinzvimbo chemidziyo. Kutenda kuvandudzwa uku uye chip ichi tinokwanisa kupfuudza odhiyo kubva ku iPhone yedu kuenda kuKePod mini uye zvinopesana, pamwe nekudzora kutamba nenzira yakatwasuka uye nezvinhu zvinoonekwa zvinoita kuti zvinyanye kujeka.
Kuti titore mukana weichi chinhu chitsva, chinhu chekutanga chatinoda kuve nechinhu chinowirirana, icho chakakosha chinhu ndechekuti ine iyo nyowani U1 chip. Ichi chinhu chiripo paPambaPod mini uye pane ese maPhones kubvira iyo iPhone 11: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max uye 12 Mini. Iyo yega modhi inosara kunze kweiyi runyorwa kunyangwe yakatangwa muna 2020 ndiyo iPhone SE. Kana tiine izvi zvishandiso, isu tinofanirwa kugadzirisa software yedu kune yazvino vhezheni inowanikwa panguva ino: iO 14.4. Iyo HomePod mini inofanirwa zvakare kuvandudzwa kune iyi vhezheni, kuti titarise isu tinofanirwa kuisa iyo Kumba kunyorera uye mukati meyekutarisa tarisa kana paine inogadziridza inowanikwa yeedu HomePod.
Kubva panguva ino, uye sezvaungaona muvhidhiyo, pese patinounza iPhone yedu padyo nePodPod, mureza uchaonekwa uyo unotibvumidza kuendesa odhiyo kubva ku iPhone kuenda kuImba yePod mini, kana kubva kumutauri kuenda ku iPhone, inodzora kutamba kwePambaPod kubva pachiratidziro che iPhone yedu, kana kana pasina chinhu chiri kutamba pane chero chishandiso, ona mazano ekutamba anoenderana nemaitiro edu, zvese podcast nemumhanzi. Nzira nyowani inonyanya kuwoneka, inokwezva uye inokurumidza kudzora kubereka kwedu uye zvinosuwisa kuti iyo yekutangaPodPod haigone kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Aya ndiwo mashandiro eHandoff nyowani anoshanda paPambaPod mini uye iOS 14.4
AR mafuremu akadaro
Handizive kana zvikaitika kune vese asi kana ndiri padhuze neHOMEPOD MINI, uye ndichishandisa yangu iPhone, pese pandinowana eyelash kusvika padanho rekuvhiringidza uye kunetsa.
Pindura Marcos AR